किन झर्छ कपाल ? र यसका समाधानको बारेमा डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले दिएको सुझाव यस्तो छ
कपाल झर्ने समस्याबाट धेरै मानिस चिन्तित हुने गरेका छन् । व्यक्तिको वास्तविक ‘लुक’ देखाउन कपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हेयर स्टाइल मात्र बदलियो भने पनि व्यक्तिको सुन्दरतामा निकै अन्तर आउँछ । कपालले अनुहारको वास्तविक ‘सेप’ र सुन्दरता देखाउन मद्दत गर्छ ।
कपाल झरेर तालु खुइलिनु कुनै ज’टिल रोग होइन । तर, पनि कपाल मानिसको सौन्दर्यसँग जोडिने भएकाले तालु खुइलिएकाहरू पुनः कपाल प्राप्तिका लागि विभिन्न उपाय गरिरहेका हुन्छन् । कपाल विभिन्न कारणले झर्छ । वंशानुगत कारणका साथै थाइराइड, क्यान्सर, डाइटिङ, त’नाव आदिका कारण पनि कपाल झर्छ ।
हार्मोनको कारणले पनि कपाल झर्छ । कपाल झर्नुलाई मेडिकल भाषामा ‘एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया’ भनिन्छ । हाम्रो टाउकोमा हुने कपाल दुई प्रकारका हुन्छन्, एन्ड्रोजेन सेन्सेटिभ र एन्ड्रोजेन इन्सेन्सेटिभ । एन्ड्रोजेन सेन्सेटिभ भनेको टाउकाको अगाडिपट्टिको भागमा हुन्छ ।
यो भएको स्थानमा कपाल धेरै झर्छ । त्यसैले अधिकांश मानिसको निधारपट्टिबाट कपाल झर्दै जान्छ र तालु देखिने अवस्था आउँछ । पुरुषहरूको कपाल झर्न थालेपछि विद्वान भएछ वा धेरै पढ्न थालेछ भनेर साथीभाइका बीचमा हँसीमजाक गर्ने गरिन्छ ।
तर, कपाल झर्नु न विद्वान भएको लक्षण हो, न धेरै पढेर कपाल झर्ने हो । शरीरमा हुने हार्मोनको ग’डबडी र वंशानुगत कारण तथा कपालमा बढी के’मिकल मिसाइएका स्याम्पू र साबुनको प्रयोगले कपाल झर्ने गर्छ । वंशानुगत कारणले कपाल झर्नुलाई ‘एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया’ भनिन्छ ।
परिवारमा बुबा वा हजुरबुबाको कपाल कम उमेरमा झरेको छ भने त्यसको वंशानुगत अ’सर छोरानातिमा पर्छ । यसको मुख्य कारण ‘डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन’ भन्ने हार्मोन हो । यसका कारण कपालको जरा सुकेर जान्छ । यो प्रकारको वंशानुगत रोग हो ।
यसको मेडिकल उपचारको साथसाथै अहिले विश्वमा कपाल प्रत्यारोपण एक प्रभावकारी उपायका रूपमा अपनाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि प्रभावकारी कपाल प्र’त्यारोपण सेवा उपलब्ध छ । मैले सन् २०११ मा दक्षिण कोरियामा गएर हेयर ट्रान्सप्लान्टका विज्ञ डा. जङ चुल किमसँग कपाल प्र’त्यारोपणसम्बन्धी तीन महिनाको तालिम लिएर आएपछि कपाल प्रत्यारोपण गर्न थालेको हुँ ।
‘नन–एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया’ चाहिँ हर्मोनको कारणले हुने समस्या होइन । मानिसको जीवनशैली र कपाल नुहाउँदा प्रयोग गरिने स्याम्पूमा हुने केमिकलको मात्राका कारण पनि धेरैको कपाल झर्ने गरेको पाइन्छ । धेरै नै कपाल झर्‍यो भने चिकित्सको सल्लाहमा ‘मिनक्ससिडिल’ औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी समय हेलमेट लगाउनेको कपाल झर्नसक्छ ।
कपालमा चाया परेको छ भने पनि कपाल झर्ने हुन्छ । कपाल झर्नबाट जोगाउन आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रयोग गर्ने स्याम्पूमा के’मिकलको मात्रा कति छ, त्यो हेर्ने गर्नुपर्छ । ज’थाभावी हेयर कलर गर्नु हुँदैन । कपालको स्टाइल चेन्ज गर्ने भन्दै कपाललाई हा’नि पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन ।
डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठ, छाला, यौ न रोग विशेषज्ञ तथा हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन
ओमेगा ३ फ्याटी एसिडयुक्त खानेकुराले कपाल झर्नबाट रोक्छ । बदाम, टुना र साल्मोनमा यस्तो भिटामिन पाइन्छ । यी खानेकुरामा हुने पोषणले तपाईको कपाल झ’र्नबाट रोकिन्छ र निरन्तर बृद्धि हुन्छ । यसले कपालालाई बढी इलाष्टिक बनाउने र टु’ट्नबाट बचाउछ
प्रोटिनः प्रोटिन कपालको लागि प्राथमिक पोषक तत्व हो । प्रर्याप्त प्रोटिन खाएमा तपाईलाई तालु खु’इलिनबाट बचाउनुका साथै कपाल फुल्नबाट समेत जोगाउँछ ।
भिटामिन ए र सीः भिटामिन ए र सी कपालका लागि प्राकृतिक हेयर कन्डिसनर नै हुन् । प्रर्याप्त मात्रामा यो भिटामिन खाएमा कपाल झर्न र टु’ट्नबाट बचाउछ । फर्सीको बिया, ब्रोकाउली र स्पिनिचमा यो भिटामिन पाइन्छ ।
म्याग्नेसियमः हाम्रो शरिरले कपालको बृद्धि गर्न लगायत अन्य विविध उदेश्यका लागि म्याग्नेसियको उपयोग गर्छ । म्याग्नेसियमको कमिले महिला र पुरुष दुबैमा कपाल झ’र्छ । आल्मोन्ड, ब्राउन राइस र काजुमा म्याग्नेसियम पाइन्छ ।
सन् २०१४ मा कपाल प्रत्यारोपण गरिएकामध्ये ८४ दशमलब ७ प्रतिशत पुरुष रहेका थिए भने १५ दशमलब ३ प्रतिशत महिला थिए ।
सोही वर्ष कपाल प्रत्यारोपणमा मात्र विश्वभर साढे २ अरब अमेरिकी डलर खर्च भएको छ।
कपाल झर्ने समस्याबाट पी’डित भएकामध्ये करिब ४७ प्रतिशत मानिस आफ्नो झरेको कपालको स्याहार गर्दा गर्दै समय गु’ज्रने गरेको छ।
७५ प्रतिशत बेलायतीले कपालको उपचार हुनेमा विश्वास नै गर्दैनन्।